यी खानेकुरा खानुस्, तनाव घटाउनुस् ! — donnews.com
बच्चालाई शिक्षाको तनाव, युवालाई जागिरको । बुढेसकालमा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या । अहिले आम मान्छेलाई थुप्रै समस्याले तनाव बढाइरहेको छ । यो परिवेश बीच विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धानले खानपानबाट तनाव गर्न सकिने तथ्य प्रमाणित गरेको छ । तनावकम गरी मन शान्त बनाउने केही खानेकुराबारे पोषणविद् सुवर्ण गुरागाईंको टिप्स यस्तो छ ।
दही खानाले तनावकम हुन्छ र दिमाग शान्त रहन्छ । दहीमा भएको माइक्रो बैक्टेरियाले चिन्ता र तनाव कमगर्न मद्दत गर्दछ ।
डार्क चकलेटको सेवनले व्यक्तिलाई तनाव, चिन्ता र उदासी कमगर्न मद्दत गर्दछ । चकलेटमा एन्टि अक्सिडेन्टहरूले मस्तिष्कको कार्य सुधार गर्दछ । यसले रक्त सञ्चारमा पनि सुधार गर्दछ ।
हरियो चियामा एलथियानिन भन्ने विशेष एमिनो एसिड हुन्छ । जसले दिमागलाई स्वस्थ राखेर व्यक्तिको तनाव कम गर्दछ । यसमा रहेको एसिडले कार्टोसोल हर्मोन पनि कम गर्दछ । कार्टिसोल हार्मोनलाई तनाव हार्मोन पनि भनिन्छ । यस कार्टसोल हार्मोनको बृद्धिका कारण व्यक्ति तनावबाट ग्रस्त हुन्छ ।
बेसारको सेवन व्यक्तिको दिमागको लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ । बेसारमा रहेको कर्क्युमिन नामक तत्वले चिन्ता र तनावलाई कमगर्दछ । कक्र्युमिन ओमेगा फैटी थ्री एसिडले डीएचए लाई बढाइ दिन्छ, जुन तनाव कमगर्ने सबैभन्दा उत्तम प्रकृया हो ।
जामुनमा धेरै एन्टिआक्सिडेन्टहरू हुन्छन्, जुन शरीरका लागि ज्यादै लाभदायक छन् । स्ट्रबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी आदि भिटामिन सी को उत्तम स्रोत हो । यि फलको खपतले व्यक्तिको तनाव कमगर्न मद्धत गर्छ ।
ओछ्यानमा पुगेपछि निदाउन समस्या हुन्छ ? यसो गर्नुहोस !
कोभिड महामारीको केन्द्रबिन्दु बन्दै युरोप : डब्ल्यूएचओ
स्याङ्जामा थप २९ जनामा एचआईभी सङ्क्रमण
‘पोखरा शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनको राजधानी’
अब कुकुर पाल्दा पनि महानगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्ने